Igama leSINGH igama kunye nomvelaphi
I-SINGH - Igama lomnqophiso kunye nomvelaphi
Liyini igama elithi Last Singh?
Isithandwa se-Singh sisuka kwiSanskrit simha , esithetha "ingonyama." Kwakusetyenziswe okokuqala nguRajput Hindus, kwaye kuseyiprofayili eqhelekileyo kumaHindu amaninzi aseMntla Indian. AmaSikhs, njengommandla, baye bamkela igama njenge-suffix kwigama labo, ngoko uya kuyifumana njengenjongo ngamaninzi ekholo likaSikh.
Igama Lokuqala Umntu: amaNdiya (amaHindu)
Igama elinguNye igama elithi Spellings: SINH, SING
Abantu abaPhezulu abaneSitulo SINGH
UMilkha Singh - owayengumzila we-Indiya kunye ne-sprinter yomhlaba eyaziwa ngokuba yi-Flying Sikh
Bhagat Singh - umgqugquzeli wezopolitiko waseNdiya
USadhu Sundar Singh - isithunywa sevangeli samaKristu saseNdiya
UMaharaja Ranjit Singh - umsunguli we-Sikh umbuso
Kuphi abantu abaneSurname Surname?
U-Singh ungumnxeba wesi-6 ogqithiseleyo kwihlabathi, ngokubhekiselele kwidatha yokusabalalisa igama kwi-Forebears, esetyenziswe ngabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-36. U-Singh udla ngokuqhelekileyo e-India, apho i-2 ebudeni besizwe. Eyona nto iqhelekileyo eGuyana (yesibili), iFiji (4th), iTrinidad neTobago (5), iNew Zealand (8), eCanada (32), eMzantsi Afrika (32), eNgilandi (43), ePoland (48th) kunye Australia (50th). U-Singh unama-249 e-United States, apho eqhelekileyo eNew York, eNew Jersey naseCalifornia.
Ngaphakathi kweIndiya, isibongo se-Singh sisoloko sifumaneka kwingingqi yeMaharasta, ngokwe-WorldNames PublicProfiler, elandelwa nguDelhi. Iqonga liqhelekile eNew Zealand, kuquka iManakua City, iSithili sasePapakura kunye nesithili saseWestern Bay of Plenty, kwakunye nase-United Kingdom, ngakumbi kwi-West Midlands.
Izibonelelo zoGenesalogy for Name SINGH
Ukukhangela amaSmiths: Amacandelo okuSesha amagama aqhelekileyo
Iingcebiso kunye nezicwangciso zophando malunga nookhokho abanegama elifanayo njengeSINGH.
Crest Family Family Crest - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjenge-Singh intsapho okanye ingubo yeengalo kwisigama se-Singh.
Iprojekthi ye-Singh DNA
Iprojekthi ye-Singh DNA ivulelekile kubo bonke abafuna ukusebenzisana ukuze bafumane ifa labo eliqhelekileyo lika-Singh ngokusebenzisa ukuhlolwa kwe-DNA kunye nokwabelana ngolwazi lomlando weentsapho.
I-SINGH yoLuntu lweNzala yoLuntu
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa komnxeba we-shawuni ye-Singh ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho we-Singh.
Uhlobo lweeNtsapho - I-SINGH Genealogy
Ukufikelela kuma-rekhodi angamahhala angama-850,000 kunye nemithi yentsapho enxulumene nomgca othunyelwe kwi-shawuni ye-Singh kunye nokuhluka kwayo kule ncwadana ye-genealogy ye-intanethi ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
GeneaNet - Singh Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomxholo we-Singh, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi, eSpain nakwamanye amazwe aseYurophu.
SING Igama loLwimi lokuLuhlu
Uludwe lothumelele lwamahhala lwabaphandi be-Sing Singani kunye nokuhluka kwazo (njenge-SINGH) ukusuka eRootsweb kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophawu lwemiyalezo edlulileyo.
Igama lomninimzi-I-SINGH yoGalobo kunye neNkxaso yeeNtsapho
Fumana izixhumanisi kwiinsana zamahhala kunye nezorhwebo malunga nesibongo se Singh.
DistantCousin.com - I-SINGH yoGalobal & Imbali Yentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela elithi Singh.
I-Singh isizukulwane kunye neNtsapho yesiGaba
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elithi Singh kwi-website yeGenesalogy Today.
I-PADILLA - Yisho igama kunye nomvelaphi
Igama elithi Sanders lavela phi?
NOMBENZI WENKULUNKULU Intetho kunye Nemvelaphi
I-MEDINA - Igama lokugqibela lokuqala kunye nenjongo
Igama leHAHN Igama kunye neNtsapho yeMbali
IGALLO Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
Kutheni Ufumana Iimpawu ze-Canvas Nge-Canvas kunye nendlela ongayisebenzisa ngayo
Iimpapasho zeeHhovisi zeHhovisi eziPhambili ze-Ofisi zakho Abahlobo bakho abayikubona Ukuza
I nguNguqulelo entsha
IYunivesithi yaseWisconsin-Oshkosh Admissions
'Umntu Omdala noLwandle' Uhlaziyo
Uluhlu lwe-Colorado's Fourteeners
Tulsi okanye i-Holy Basil eHindu
Imfazwe yaseMerika: uLieutenant General John Bell Hood
Ceiba pentandra: Umthi ongcwele wamaMaya
Ubomi beKukai, aka Kobo Daishi
Ukuvutha iMold and values
Indlela yokudibanisa "Confondre" (Ukudibanisa) ngesiFrentshi
Ukuhambisa iiCakes zokuzalwa kwiidola
Yintoni eyenzekayo kwiCricket emva kokufa kukaBuddy Holly?
Iikholeji zase Colorado
Isitayela esihle (i-rhetoric)
I-Merry Widow Synopsis
Ukongeza umgca kwiKhosi yethu yeCosmic